Classic Group dia namoaka fampirantiana indostria dimy lehibe any Dubai International Building Materials
Nanomboka ny 26 novambra ka hatramin'ny faha-29, ny fampirantiana indostria dimy lehibe indrindra any Afovoany Atsinanana miaraka amin'ny indostrian'ny fananganana lehibe sy matihanina indrindra any amin'ny faritra Afovoany Atsinanana dia natao tany Dubai World Trade Center any amin'ny United Arab Emirates. Ny Vondrona Klasika dia nanatanteraka tsara ny toe-tsain'ny Kongresy nasionaly faha-19 an'ny Antoko Kaominista Shina sy ny federasiona misokatra ho an'ny fampandrosoana ara-toekarena ao amin'ny faritany, ary navitrika nandefa ekipa iraisam-pirenena handray anjara amin'ny fampiratiana mba hanitarana bebe kokoa ny tsena Afovoany Atsinanana ary mampivoatra ny fitaomam-panahy iraisam-pirenena amin'ny orinasa.
Ny fampirantiana indostria dimy lehibe any Dubai any Moyen Orient, izay naorina tamin'ny taona 1980, no fampisehoana lehibe indrindra sy fampirantiana lehibe indrindra amin'ny fananganana, fitaovana fananganana ary serivisy any Atsinanana. 100,533 metatra toradroa ny faritra fampirantiana, manintona ireo mpamatsy fitaovam-panorenana sy fitaovam-panorenana avy amin'ny lafivalon'izao tontolo izao. . Mandritra izany fotoana izany, ny fampirantiana milina fananganana, fiara ary fitaovana any Afovoany Atsinanana dia fampirantiana matihanina mifantoka amin'ny fitaovana fananganana, milina, fitaovana ary fiara any Atsinanana. Ny fitohizan'ny ny tsenan'ny fananganana tany Afovoany Atsinanana tato anatin'ny taona vitsivitsy dia nahatonga ny fangatahana mafy amin'ny fitaovana fananganana, fitaovana fananganana ary milina fananganana, ary nahasarika ny saina rehetra.
Ny vondrona Klasika dia mifikitra amin'ny foto-kevitra fampandrosoana momba ny fanavaozana, fandrindrana, maitso, fisokafana ary fifampizarana, dia manararaotra ny fivoarana, ny toerana misy azy ary mazoto miasa amin'ny tsenan'i Moyen Orient. Tao amin'ity fampirantiana ity dia naneho ny orinasa ny zava-bita ara-teknolojia mivoatra, ny tetikasa solontena mahazatra ary ny zava-bitan'ny fampandrosoana ny indostria amin'ny sehatry ny vy izay mampiseho ny firoboroboan'ny firoboroboan'ny trano maitso, ary naneho ny fizotran'ny R&D, ny fanamboarana, ny fananganana ary ny fananganana trano vita amin'ny vy vy. . Ny trano ho an'ny daholobe, tranobe efa vita, kianja ary seranam-piaramanidina dia notanterahina sy novolavolaina. Nahazo fiderana sy fankasitrahana iraisan'ny mpanotrona any ivelany izy ireo ary fifanarahana fiaraha-miasa maro no notanterahina teny an-toerana.
Amin'ny maha mpanolo-tsaina sy mpanamboatra endrika ny mazika maitso, ny Vondrona Group dia hifantoka amin'ny fambolena tombony vaovao amin'ny fifaninanana ara-barotra vahiny miaraka amin'ny teknolojia, marika, kalitao sy fenitra ho fototr'izy ireo, ary ampifandraiso amin'ny maha-zava-dehibe ny R&D sy ny famolavolana, manangana marika teknolojia ary hanamafy ny marika . Ny serivisy, manatsara ny fifaninanana feno ary mampiroborobo mafy ny fiaraha-miasa isam-paritra "One Belt, One Road" hahatratrarana ny fiaraha-miasa mandresy ary ny fampandrosoana iraisana.